Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. घाटमा लाँदै गरेको शवले जुरुक्कै उठेर छोरालाई कराउन थालेपछि यस्तो हंगामा – Emountain TV
घाटमा लाँदै गरेको शवले जुरुक्कै उठेर छोरालाई कराउन थालेपछि यस्तो हंगामा
काठमाडौं, २८ भदौ । भारतको भोपालमा एउटा सोच्नै नसकिने घटना घटेको छ। जहाँ ७६ वर्षीय मोटुमल वासवानी मरेको करिब पाँच घन्टापछि फेरि बाँचेका छन् । जुन बेला उनलाई घाटमा लगिँदै थियो ।
मृत्यु भएको पाँच घण्टापछि उनको शव अस्पतालबाट शववाहनमा हालेर घर ल्याउँदै गर्दा उनी अचानक जुरुक्क उठेका हुन्। ति मृतक भनिएका व्यक्तिले उठेर भने ‘हरि, मलाई कहाँ लाँदैछौ ? ‘मोटुमललाई भदौ २१ गते हृदयघात भएपछि उपचारका लागि भोपालस्थित चिरायु अस्पताल लगिएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य झन् बिग्रिन थालेपछि गत सोमबार भदौ २६ गते भेन्टिलेटरमा राखियो।
मंगलबार बिहान लगभग ८ बजे चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरे। यता मृतकका नातेदारहरू उनको घरमा भेला भए र अन्तिम संस्कारको तयारी गरे । कात्रोसमेत तयार पारेर मसानघाटमा जलाउने चिता पनि तयार भयो।
मृत्युको घोषणापछि केही नातेदार अर्को शहरबाट आउनुपर्ने भएकाले अन्तिम संस्कार दिउँसो २ बजे गर्ने निर्णय भयो। तर अन्तिम संस्कारका लागि घाटतर्फ लान भनेर शव बहानमा रोखका मोटुमल त नाटकीय रुपमा शववाहनमै जुरुक्क उठेर बोल्न थाले। त्यसपछि उनलाई तुरुन्तै घर लगियो। एजेन्सी